PressReader - Ilanga: 2017-10-02 - BALAHLE AMATHULUZI BEKHALA NGOKUXHASHAZWA
BALAHLE AMATHULUZI BEKHALA NGOKUXHASHAZWA
Ilanga - 2017-10-02 - Izindaba - THANDEKA NGOBESE thandeka.ngobese@ilanganews. co.za
ZILAHLE phansi amathuluzi zagxoba itoyitoyi izisebenzi ezingaphezu kwama-300 zaseHillside Smelter edume ngeleSouth 32 eseRichards Bay, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal, zikhala ngokwenyuselwa amaholo.
Lezi zisebenzi ezingamalunga eNational Union of Metalworkers of South Afica (Numsa) neSolidarity, lize lashona elangoLwesihlanu ziyigxoba zivale imigwaqo ngamathayi avuthayo, zingafune nazimoto ezingena emasangweni ale nkampani.
Ngokusho kukaMnu Mike Mkhize, ongesinye salezi zisebenzi, uthi bafuna ukwenyuselwa amaholo nge-10% kodwa umqashi ufuna ukubanikeza umhlomulo ka- R100 000 oyisigaxa umuntu ukuze angabenyuseli amaholo.
“Laba baqashi ngonyaka odlule basenze esifanayo bangasenyusela amaholo, basinika u-R50 000 oyisigaxa umuntu emunye. Le nto iyasilimaza njengoba izinto ziqhubeka zinyuka kodwa umholo umi ndawonye.
“Kakwenzi mehluko ukunikezwa isamba manje esizosisebenzisela ezinye izinto bese uthwala kanzima unyaka wonke umholo usudonswa yi- medical aid namapholisi sisale nobala olungakwazi ukusi- philisa,” kusho uMnu Mkhize.
Izolo ngeSonto, uMnu Mbuso Ngubane ongunobhala weNumsa KwaZulu-Natal, utshele ILANGA ukuthi izisebenzi zale nkampani ziteleka nje, yingoba umqashi akazemukeli izimfuno zazo.
“Le nkampani umkhiqizo wayo iwuthumela kwamanye amazwe ngamandla alezi zisebenzi. Uma sekufanele zigqugquzelwe ngokusebenza kwazo ngokuzikhandla, abaqashi bathi bazozinika u-R100 000 bese ingenyuswa imiholo njengoba sifuna yenyuke ngo- 15%.
“Lokhu sikubona njengokuxhashazwa kwezisebenzi, ngabe kungcono ukuba le mali bazonikwa yona njengebhonasi ngokusebenza kwabo kanzima kodwa imiholo yenyuswe.
“Inzunzo eyenziwa yile nkampani - engaphezulu kwale ebisuke ilindelekile - izisebenzi kazihlomuli lutho kuyona, izikhulu zicazelana zodwa ekubeni kusuke kuyizisebenzi ezisebenze kanzima ukuze leyo nzuzo itholakale.
Izisebenzi zizoqhubeka nokuteleka kuze kube izimfuno zazo ziyazithola,” kusho uMnu Ngubane. Izikhulu zale nkampani kuze kwashaya isikhathi sokuloba zingatholakali ukuba ziphawule ngalesi siteleka njengoba kuthiwe zivaleleke emhlanganweni.
Kuthiwe zizophuma kowazo zodwa zingene komunye lapho zizohlangana khona nenyunyana.